नेपालमा सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै धेरै, १ तोलाको झण्डै १ लाख ! — sancharkendra.com
१भारतलाई पाकिस्तानले दियो ठुलो झट्का, जम्मू–कश्मीर र लद्दाखलाई समेटेर जारी गर्यो नयाँ नक्सा
२भारतलाई अर्को ठुलो झट्का, कश्मीरसहितको भूभाग समेटेर पाकिस्तानले जारी गर्यो यस्तोनयाँ नक्सा
३बुधबारदेखि लागु हुने गरि लकडाउन गर्ने निर्णय, तर यी क्षेत्रमा लाग्नेछैन प्रतिबन्ध
४नेपालमा कोरोना संक्रमण ह्वात्तै बढेपछि बोल्यो डब्लूएचओ
५उपत्यकामा ६२ सहित थप २५९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या २१ हजार नाघ्यो
६फेरि लकडाउन गर्नेबारे विज्ञले दिए प्रधानमन्त्री ओलीलाई यस्तो सुझाव
७कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्ला कोरोनामुक्त
८लकडाउन गर्ने/नगर्नेबारे बालुवाटारमा विज्ञहरुसँग छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली
९फेरि लकडाउन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी
१०विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या १ करोड ८४ लाख नाघ्यो
११कोरोना महामारीका बेला पूर्व राजाले गरे देश छाड्ने घाेषणा
१२नेपालमा कोरोना नियन्त्रण बाहिर जान लागेको भन्दै आयो डरलाग्दो चेतावनी, स्थिति भयावह हुनसक्ने
नेपालमा सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै धेरै, १ तोलाको झण्डै १ लाख !
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा एक लाख नजिक पुगेको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले बिहीबारका लागि छापावाल सुनको प्रतितोला कारोबार मूल्य ९९ हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।
अघिल्लो दिनको तुलनामा तोलामै पाँच सय रुपैयाँले सुनको भाउ बढेको महासंघले जनाएको छ । यसैगरी तेजाबी सुनको भाउ पनि बढेर कारोबार मूल्य तोलाको ९८ हजार पाँच सय ६० रुपैयाँ पुगेको छ । चाँदीको भाउ प्रतितोला १२ सय २५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यता बैंकहरुमा अधिक तरलता भएपछि केन्द्रीय बैंकले २० अर्ब रुपैयाँ तान्ने भएको छ । बैंकहरुमा २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी तरलता थुप्रिए पछि रिभर्स रिपोमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता तान्न लागेको हो ।
७ दिनमा परिपक्व हुने गरी केन्द्रीय बैंकले रिभर्स रिपो जारी गर्न लागेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता बढी भएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले रिभर्स रिपोमार्फत तरलता प्रशोचन गर्दछ । राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता अपुग भएको बेला रिपो जारी गरेर तरलता प्रवाह गर्ने गर्दछ ।
बैंकिङ प्रणालीमा साधारण प्रकृतिको अधिक तरलताको स्थिति देखिएमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिको निर्णयानुसार बैंकिङ प्रणालीबाट अल्पकालीन अवधिको तरलता प्रशोचन गर्न प्रयोग हुने उपकरण रिभर्स रिपो हो ।
यस उपकरणको निष्कासनका दिन बोलकबोलमा सफल बोलकर्ताको राष्ट्र बैंकमा रहेको खाताबाट रकम झिकिने भएकोले तोकिएको समयावधिको लागि तरलता प्रशोचन हुन्छ । बोलकबोलमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा कम ब्याजदर बोल गर्ने संस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी क्रमैसँग आह्वान रकमसम्म बाँडफाँट गरिन्छ ।
तरलता प्रशोचन गर्ने प्रयोजनार्थ प्रयोग हुने रिभर्स रिपो उपकरणको बोलकबोल आह्वान तथा निष्कासन गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले आप्mनो स्वामित्वमा रहेको ट्रेजरी बिल धितो स्वरूप राख्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
रिभर्स रिपो भुक्तानी मितिमा निष्कासन मितिका दिन सफल बोलकर्ताको खाताबाट खर्च गरी लिएको रकम सोही खाता जम्मा गरी एकमुष्ट साँवा ब्याज रकम भुक्तानी गर्ने गरिन्छ ।
भारतलाई पाकिस्तानले दियो ठुलो झट्का, जम्मू–कश्मीर र लद्दाखलाई समेटेर जारी गर्यो नयाँ नक्सा